I-ZTE Axon M, i-smartphone esongelayo enesikrini esiphindwe kabini | Iindaba zeGajethi
I-ZTE isimangalisile ngenkcazo yeselfowuni entsha ekhethekileyo. Yiselfowuni yokuqala kwintengiso enescreen esiphindwe kabini, esongelayo kwaye esikhe sasihambisa sinetafile kwinceba yethu. Imalunga nento entsha I-ZTE Axon M, iselfowuni okwangoku eza kuqaliswa e-United States, kodwa ngaphezulu kweenyanga ziya kuvela kwezinye iimarike.
I-ZTE Axon M yiyo iselfowuni enzima nengqindilili. Inekhamera enye kuphela kwaye ibhetri yayo idlula kumthamo wama-3.000 milliamps. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ifihla ntoni le nto efowuni I-Android ngaphakathi? Makhe sihlolisise iimpawu zayo.
1 Isikrini esiphindwe kabini kwaye iba 'yithebhulethi'
2 Amandla, imemori kunye nokugcinwa
3 Unxibelelwano kunye nekhamera
4 Ibhetri kunye nenkqubo yokusebenza
Isikrini esiphindwe kabini kwaye iba 'yithebhulethi'
Ukuba ibingeyonxalenye yayo iphambili, i-ZTE Axon M ibiya kuba siselfowuni enye ejoyina ikhathalogu yaseAsia. Nangona kunjalo, yabo izikrini ezibini ezi-5,2-intshi badityaniswa yihenjisi, bayenza ikhetheke kakhulu. Zombini iipaneli ziyafana: ubungakanani obufanayo kunye nesisombululo esifanayo (i-HD epheleleyo).
Ngoku, Le fom factor imisela ubunzima bayo bokugqibela (i-230 gram) kunye nobukhulu bayo (i-12,1 millimeters). Ngoku, ukusebenza ngedesika eyandisiweyo kuya kufana nokuba uphambi kwethebhulethi. Ngokunjalo, oku kuvumela i-ZTE Axon M ukuba isebenzise usetyenziso ngaxeshanye; inye kwiscreen ngasinye.
Amandla, imemori kunye nokugcinwa
Ukusuka kwi-ZTE abakhethe iprosesa yeQualcomm yamva nje, kodwa bagqibe kwelokuba babandakanye enye yezona zoluhlu oluphezulu ukusuka kwizizukulwana ezidlulileyo. Sithetha ngayo Qualcomm Snapdragon 821I-chip-core chip ene-frequency esebenzayo ye-2,15 GHz.
Kule kuya kufuneka songeze I-4 GB ye-RAM -Ayikho enye yee-smartphones ezinayo kakhulu, kodwa ayisiyiyo enye yezona zincinci. Ngelixa amandla ayo okugcina esekwe kwi Indawo yangaphakathi engama-64 GB, ngaphezulu kwe-avareji. Kwaye ziindaba ezimnandi zokuba iinkampani azisekho kwiimodeli zazo kubuchule bokuhlekisa be-16GB. I-ZTE Axon M ikuvumela ukuba usebenzise amakhadi ememori eMicrosoftSD ukuya kuthi ga kwi-256 GB. Ukugcina iifayile zalo naluphi na uhlobo akuyi kuba yingxaki kuye.
Unxibelelwano kunye nekhamera
Isikrini esitsha esine-screen ezimbini se-ZTE sizibophelele kuzo zonke iintlobo zonxibelelwano. Uyakwazi ukusebenzisa isantya esiphezulu seWiFi; IBluetooth yamandla asezantsi kwaye ungasebenzisa uthungelwano lwamva nje lwe-4G ukufezekisa ukukhangela kwiwebhu ngokufana kakhulu nekhaya.
I-ZTE Axon M ikwanayo nomfundi ofunda ngeminwe idityaniswe kwiqhosha lokucima / lokucima, kananjalo uya kuba nemodyuli ye-GPS kunye ne-3,5 mm audio jack. Ngokwesandi, i-ZTE Axon M ine-teknoloji yeDolby Atmos ukufezekisa isandi esingqonge. Nangona oku kukwabulela kwizithethi ezibini ezidibeneyo.
Ngokumalunga nenxalenye yokufota, enkosi kuyilo oluthile lwe-smartphone, siya kuba nekhamera enye kuphela. Oko kukuthi, iyakusebenza njengekhamera engasemva kunye nekhamera yangaphambili. Inkqubo ye- isivamvo zii-megapixels ezingama-20; Ikhatshwa lilitha ezimbini ze-LED kwaye inokurekhoda iividiyo kumgangatho we-4K.
Ibhetri kunye nenkqubo yokusebenza
Ibhetri ye-ZTE Axon M ifikelela kwi Iimitha ezingama-3.180 umthamo. Oku kuyakwenza kube lula kuthi ukuba sifike esiphelweni sosuku. Ukongeza, le mobile inetekhnoloji yeQualcomm ekuvumela ukuba ukonwabele ukubiza ngokukhawuleza (ukuya kuthi ga kumaxesha ama-4 aphezulu kunentlawulo eqhelekileyo) ebizwa 3.0.
Kwelinye icala, iselfowuni entsha enesibetho yeZTE isekwe kwi-Android. Kwaye inguqulelo eya kufakelwa umzi mveliso yile Android 7.1.2 Nougat. Okwangoku azikho iindaba ze-Android Oreo okanye i-Android 8.0.
I-ZTE Axon M iya kufika kwimarike kamva kulo nyaka kwimarike yase-US ngokukhethekileyo kunye nomqhubi we-AT & T. Nangona kunjalo, I-ZTE sele iqinisekisile ukuba kwezi nyanga izakuvela nakwezinye iimarike zaseYurophu naseAsia. Nangona kungekho magama aqinisekisiweyo okanye ixabiso elichanekileyo lesiphelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-ZTE Axon M, i-smartphone esongelayo enesikrini esiphindwe kabini